August 2017 - Nepali Sajha
कूटनीतिक कर्मचारीले कर तिरेनन्, २२ करोड उठाउन बाँकी
Published on August 31, 2017 in नेपाली by Nepali Sajha
Sponsored Link: १६ भदौ, काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर विगत १० वर्षदेखि सरकारलाई बुझाएका छैनन् । कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने कर बक्यौता २२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो बक्यौताबारे मौन बस्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वैदेशिक भत्ताको अनिवार्य कर…
Sponsored Link: मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकः अर्थमन्त्री कार्की काठमाडौँ, भदौ १६ गते । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिन थालेकाले सबै क्षेत्रबाटसहयोग एवं लगानीका क्षेत्रमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छ । त्यसलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी चिन्तनशील छाँै । उद्योग व्यवसायी एवं…
दुई चरणमा कहाँ कहिले चुनाव ?
Sponsored Link: काठमाडौँ, भदौ १६ गते । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते ४५ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले भौगोलिक अनुकूलता ध्यानमा राखेर हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा पहिलो चरणमा र पहाड तथा तराईका जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन…
Prime minister’s office still awaits supply ministry’s investigation report
Published on August 31, 2017 in Latest by Nepali Sajha
Sponsored Link: Kathmandu, August 31 The Office of the Prime Minister and Council of Ministers, which had two weeks ago written to the Ministry of Supplies to investigate alleged irregularities in Nepal Oil Corporation’s land purchase deals and submitareport within 15 days, is still awaiting the investigation report. The NOC had purchased land…
कांग्रेसका उम्मेदवारः वीरगञ्जमा अजय द्वीवेदी, जनकपुरमा मनोज साह
Sponsored Link: १५ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवार तय गरेको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता विमलेन्द्र निधीबीचको लामो छलफलपछि अधिकांश उम्मेदवार तय भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, केही असन्तुष्टि मिलाउन बाँकी रहेकाले सबै उम्मेवारको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । शुक्रबार २ नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय…